Akka oduu Liibiyaa fi Somaaliyaa dhufteetti Turkiin hujii tana jabeessitee itti jirti. Liibiyaa abbootii waraanaa lamatti wal irratti qabee gama gamaan bulchuutti jira.Tokko Waraana GNA kaan waraana ammoo LNA jedhanii maqaa baafatan.
Akka daarekterii meediyaa waraana Libiyaa Col.Khaled Mahjoub TV Arabaa irratti torbaan dabre jedhetti,Turkiin milishoota Tiripoolii jiran gargaartee dira Sirtee lolanii deebisuuf warrra nama fixu kuma hedduu achitti duulchifte.
Warra hujii akkanaatiif Somaalii filatan jedhan ammoo achi gahuu fi dhibaachuun mirkanaa miti.
Tokkummaan Mootummootaa Liibiyaa bulchiinsa GNAti bulchiinsa jedhee gargaara.Liibiya muummee ministeraa Fayiz Al Saraaj jedhee gargaara Tokkummaan Mootummootaa.
Waraanii kun Sirtee humna waraana Kaliifaa Haftaar ka maqaa LNA beekan irraa deebifachuuf loluutti jira.
Qataarilleen akkuma Turkii Sirtee deebisuun Somaalota hedduu duulchisuu kurfoo jirti ykn ammoo duulchisuuyyuu hin ooltu jedha.Footoo waraana kanaallee media Arba ahedduu irratti argan.
Turkiin cibraa waraanaa hedduu Soomalee keeyyatte Turkii fi Qataarilleen waraanaa fi basaasa hedduu Soomaleef leenjifte akka oduu media Arabaati.
Paul Sullivan Yuuniverstii Ittisa Biyya Amerikaa barsiisa. Turkiin waraana namaan fixan Liibiyaatti oofuun waan mamaati jedha.Turkiin ibidda sun keessa duuduu hin feetu.”
Abbootiin waraana Liibiyaa yoo wal hadhan marroo hedduu warra waliin fixan qaxaratanii biyya biyyaa walti yaammatan.
Pirezidaantiin Liibiyaa ka durii Mohaammed Gadaafii waraanaa isaa dhugeeffachuu didee diigee warra namaan fixan gara dhibii qaxarate jedha, Sulivaan.
Ramy Abdel Rahman dhaaba British jirtu ka rakko Siiriyaa Tohatu keessa hojjata. Turkiin jara namaan fixxu kuma 18 Siiriya keessaa filattee Liibiyaatti duulchite.
Akka oduu himaan waraana Liibiyaa Mj.,Jeneraal Ahmed Almssmarry jedhetti ammoo warrii Siiriyaa guuranii dhufaniin kun kuma hedduu bididruuu duudee torbaan dabre Tiripooliin qaxxaamuree Xaliyaanatti baqate.